Obodo | RayHaber | Zọ okporo ụzọ | Okporo ụzọ | cable ụgbọ ala
Maapụ Metrobus: can ga-ahụ ụzọ nkwụsị Metrobus dị n'otu maapụ. Anatolia nke Istanbul [More ...]
Metrogbọala ndị ọhụrụ nke ụgbọ ala nke Istanbul gosiri
Obodo Obodo isi obodo Istanbul na-ewebata ụgbọala ọhụrụ a ga-ewepụta na Bursa n'usoro usoro metrobus, nke bụ otu n'ime ụgbọ njem ọha na eze na-enwekarị n'obodo ahụ. A na-anwale obodo ọhụrụ a ugbu a, ọ bụrụ na ụmụ amaala amasị ya. Ọtụtụ mmadụ na Istanbul [More ...]
Ego ole Xraal nke 2019-X nke Lira ..? Mkpesa tiketi Eletrọnik Ego ole Lira ..?
Ọnụ ego ịbanye na metrobus, nke bụ otu n'ime ụgbọ njem ndị ọha na-ejikarị na Istanbul, bụ otu n'ime ihe dị mkpa. E nwere ụgbọ njem dị iche iche maka obodo ukwu na-ebute Beylikdüzü na Söğütlüçeşme. Ibi ma ọ bụ ileta Istanbul [More ...]
A chụpụrụ ịdị ukwuu nke larịị metrobus, ọbara njem nke ụgbọ njem na Istanbul ka a ga-atụgharị uche na Mgbakọ Metrotù Na-ahụ Maka Obodo nke Istanbul. Mmụba nke ọnụ ọgụgụ ndị njem na-eji Altunizade kwụsịtụrụ. SözcüDabere na akụkọ banyere Ozlem Guvemli'nin; Lụrụ ọhụrụ metrobus ahịrị na Istanbul buru ọtụtụ nde ndị njem n'etiti kọntinenti abụọ [More ...]
Ihe ọdịda nke Metro, ihe mberede Metrobus Imamoglu megide Sabotage Insidious
Sözcü Na edemede ya bipụtara taa, Can Ataklı dọọrọ uche gaa na nsogbu nke njem njem na Istanbul wee dee na enwere ike imebi iwu megide Onye Isi Obodo nke Obodo Metropolitan (IMM) Ekrem Imamoglu. Atakli, mgbe ntuli aka nke Imamoglu dika onye isi ala [More ...]
Udiri 2007 metrobus, nke nwere ogologo nke 44 kilomita, mejupụtara ọdụ 52 na nke malitere ijere ndị bi na Istanbul na 545 ozi. 950 puku ndị njem kwa ụbọchị, nke nwere ebe dị mkpa na njem ụgbọ njem Istanbul [More ...]
Onye na - ahụ maka akparamaala okporo ụzọ ga - abụrịrị ndị ọkwọ ụgbọ oloko na Istanbul
Metrobuses, ndị bịara ihe mberede a mere na Istanbul nso nso a, nọ n'okpuru ntụpọ. Ndi IOM ahọpụtala onye isi ulo oru nyocha ihe mberede a ma choo onye okacha amara nke ulo oru ndi injinia. Onye otu Mgbakọ Mgbakọ nke IMM, okporo ụzọ na ọkachamara nchekwa okporo ụzọ [More ...]
N'agbanyeghị oke mbelata na 2019 n'ihe ọghọm Metrobus, IETT mere nyocha ọhụụ n'ihe ọghọm abụọ na nso nso a. Onye isi oche nke Nnyocha ahụ ji aka ya mee nyocha ihe mberede ndị ahụ. Arịrịọ a chọrọ site na berlọ nke Ndị Injin Egwuregwu [More ...]
Drikwọ ụgbọ ala na usoro echekwara dị nchebe iji gbochie ihe mberede Metrobus
IETT batara ọkwa nke ikpeazụ na ule metụtara "Nchekwa vingkwọ ụgbọala na Telemetry System veren, nke na-enye ndị ọkwọ ụgbọala aka ná ntị n'oge. Ka usoro eji eme ihe n'okporo ụzọ Metrobus, a ga-egbochi ụzọ ịgbanarị na ndagide ụzọ. Otu n'ime ndị mmekọ nke obodo Istanbul Metropolitan Munns (IMM) [More ...]
Halıcıoğlu Metrobüs Hit Metrobus, 3 merụrụ ahụ
Metrobus na ntụziaka nke Mecidiyeköy, Halıcıoğlu metrobus n'ihu ndị 3 merụrụ ahụ n'ihi nke a. Ihe ọghọm ahụ mere na Beyoğlu Halıcıoğlu metrobus stop. Dabere na ozi enwetara n'oge 9.45 na Istanbul, ntụziaka nke Avcılar metrobus, Halıcıoğlu kwụsị mgbe ọ na-eru nso [More ...]
Ọmụmụ ihe ọhụrụ sitere na IETT iji belata njupụta Metrobus…
Obodo isi obodo Istanbul (IMM) bidoro usoro ọmụmụ nke Onye isi ala Ekrem İmamoğlu mejupụta nnukwu ihe achọtara n'obodo ukwu ahụ. N'ezie, ụgbọ ala efu efu nke 3 bidoro iziga Altunizade Station maka njem ọ bụla nke Üsküdar - Sancaktepe Metro Line, nke kpatara mmụba ndị njem. ebe [More ...]
IMM gbaghara maka Metrobus na ọkwa ọkwa
Obodo Obodo Istanbul rịọrọ mgbaghara n'ihi oke ike nke nkwụsị Altunizade metrobus n'ụtụtụ. Iji meziwanye ọnọdụ ahụ, Söğütlüçeşme kwuru nke a maka metro ọ bụla [More ...]
Nkwupụta Ọkụ na ọkụ IETT
Ọkụ dị na mpaghara injin dị na Darülaceze-Perpa. Enwere ọgba aghara na ụgbọ elu metrobus n'ihi ọkụ. IETT metrobüste kwuru okwu banyere ọkụ ahụ. Nkwupụta e mere; Yaklaşık ụgbọ ala 525 nke nọ na ọdụ ụgbọ mmiri IETT metrobus anyị [More ...]
IMA na-ekwupụta ihe kpatara njupụta na buskwụsị Mpụ
Nnukwu ọdụ ụgbọ mmiri Istanbul (IMM) na-akwụsị n'ụtụtụ, kwuru na ike ụgbọ ala ahụ bụ n'ihi ọdịda. Na nkwupụta nke Obodo Obodo Metropolitan nke Istanbul kwuru banyere okwu a, ekwuru, 07 na Istanbul n'ụtụtụ a: Arụ ọrụ ụgbọ ala nke eriri Linebus na Avcilar IMM Social Facilities Station na 59 [More ...]
Lightsgbọ elu ụgbọelu HT19 Metrobus Amalite!
HT19 IU Cerrahpasa - Cumhuriyet Agbata ụgbọ elu metrobus larịị malitere. Nkwupụta nke IETT kwuru dị ka ndị a; HT19 IU Cerrahpasa - Cumhuriyet Mah. Udiri Metrobus anyị ga-amalite ịrụ ọrụ dị ka ụbọchị 25.09.2019. Line, Karaağaç Village Road - Alkent - [More ...]
IMM 'Imamoglu Metrobus kwụsịrị Masjid Station' Akụkọ Gọrọ
IMM 'Imamoglu Metrobus kwụsịrị Masjid Stop' News ghaa ụgha. 19 Septemba 2019 anaghị egosipụta ozi ọma nke ebipụtara na ụfọdụ mgbasa ozi n'okpuru isiokwu 'IMM emechiri Mescid na Uzunçayır Metrobus stop'. Kadikoy Uzunçayır metrobus metrobus, nke bụ isiokwu nke akụkọ [More ...]